GPS | ဆိုင်မွန်စာကြည့်ဆိုဒ်
ဖုန်းထဲမှနေ ကမ္ဘာပေါ်က နေရာစုံကို လျှောက်သွား ချင်သူတွေ အတွက်
ကမ္ဘာပေါ်က အထင်ကရ နေရာစုံကို ဖုန်းထဲကနေ အပြင်မှာ တကယ် သွားလာနေရ သလို လျှောက်သွား ကြည့်လို့ ရမယ့် Google Street View app ထွက်ရှိ လာပါပြီ။ ဒီ app လေးဟာ Android အတွက်တော့ ထွက်ရှိ ထားတာ နည်းနည်း ကြာနေပြီ ဖြစ်ပေမယ့်
ယခု အခါမှာတော့ Android အတွက်ရော iOS အတွက်ရော Feature အသစ်တွေ ထပ်မံ ထည့်သွင်းပြီး ထွက်ရှိ လာတာပါ။
ကမ္ဘာ့နေရာ အနှံက ကိုယ်သွားချင်တဲ့ အထင်ကရ နေရာတွေ ၊ မြို့ကြီးတွေကို ဒီ Street View app လေးထဲ ကနေ ၀င်ပြီး ၃၆၀ ဒီဂရီ View နဲ့ ဟိုဟို ဒီဒီ လမ်း လျှောက်ပြီး ကြည့်ရှုနိုင် မှာပါ။
နောက်ပြီး ကိုယ် ကိုယ်တိုင်လည်း လက်ရှိ ကိုယ်ရောက် နေတဲ့ ရှုခင်း မြင်ကွင်း နေရာကို ဒီ Google Street View app ကို အသုံးပြုပြီး 360 Degree View နဲ့ရိုက် ၊ ပြီးရင် Google Maps ထဲမှာ တိုက်ရိုက် ပြန်တင်နိုင် ပါတယ်။ တခြား သူတွေလည်း ကိုယ်ရောက်နေတဲ့ နေရာကို သူတို့ရဲ့ ဖုန်းထဲ ကနေ လာရောက် လည်ပတ်လို့ ရတာပေါ့။
Google Street View app ကို မိမိတို့ရဲ့ iOS, Android ဖုန်းတွေမှာ စမ်းသပ် အသုံးပြုလို သူများ အတွက် အောက်က link များမှာ Download ရယူနိုင်ပါမယ်။
▼ Google Street View for iOS ▼ OR ▼ Google Street View for Android ▼
Original link - https://www.facebook.com/thetnaing.mmas
ကဏ္ဍ Google, GPS, maps, Phone Application
Android ဖုန်းတွေမှာ မြေပုံကြည့်နိုင်ဖို့ MapFactor: GPS Navigation 1.3.24 apk update လေးကို တင်ပေး
လိုက်ပါတယ် ။ ဒီကောင်လေး ကတော့ ကမ္ဘာ ပေါ်က ရှိသမျ နိုင်ငံတွေ ထဲက မြို့တွေရဲ့ နေရာတွေ လမ်းတွေ
အဆောက် အဦးတွေကို မိမိရဲ့ ဖုန်းထဲ ကနေပြီး အလွယ် တကူကြည့် နိူင်ဖို့ တင်ပေး လိုက်တာပါ ။
မိမိကြည့်ချင်တဲ့ နိုင်ငံတွေရဲ့ မြို့တွေကို အလွယ်တကူ ရိုက်ရှာ နိုင်ပြီး မိမိသွားချင်တဲ့ မြို့နယ်တွေ ကိုပါ ရှာလို့ ရ
နိုင်ပါတယ် ။ ဒါက မိမိကျွမ်းကျင်နေတဲ့ မြန်မာ နိုင်ငံ အတွက် မပြောလိုပေမဲ့ ပြည်ပမှာ နေတဲ့ ကျွန်တော်တို့လို
လူတွေ အတွက် အလွန်တရာမှ အသုံးဝင် လှပါတယ် ။
ဘာကြောင့်လဲ ဆိုတော့ မိမိနေတဲ့ နေရာကနေပြီး မိမိသွားချင်တဲ့ နေရာတွေကို ဘယ်လမ်းက ဘယ်လိုသွားပြီး
ဘယ်လို အလွယ်တကူ ရောက်နိုင်မယ် ဆိုတာကို ကြည့်လိုရလို့ ပါပဲ ခရီးက ဟိုယောင် ဒီယောင်နဲ့ မကြန့်ကြာ
ဖိုင်ဆိုဒ်က 11mb ပဲရှိပြီး android ဖုန်းအားလုံးမှာ အသုံးပြု နိုင်ပါယ်ခင်ဗျာ့ ။ အင်တာနက် မရှိတဲ့ နေရာတွေမှာ
လည်း အသုံးပြု နိုင်ပါတယ် ။ အသေးစိပ်ကိုတော့ စတိုးနှစ်ခုလုံးမှာ ဖတ်ရှုနိုင်ပါတယ် ။
Updated: August 28,2014
Requires AndroidAndroid: 2.3 or higher
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Saturday, September 06, 20142comments:
ကဏ္ဍ Android, GPS, maps, Phone Application
မြန်မာပြည်မှ နေရာတိုင်း၊ မြို့တိုင်းကို 3D ရုပ်ကြွ မြင်ကွင်းနဲ့ ကြည့်ရှုလိုသူတွေ အတွက် 3D map Myanmar
[Burma] v1.0 for Android ကို တင်ပေးလိုက် ပါတယ်။
အဆောက်အဦးတွေ၊ မြေမျက်နှာသွင်ပြင်တွေကို 3D ရုပ်လုံး ရုပ်ကြွတွေနဲ့ ကြည့်ရှုနိုင်မှာ ဖြစ်သလို 2D ရုပ်
ထွက် နဲ့လည်း ပြောင်းလဲ ရှာဖွေ ကြည့်ရှုနိုင် ပါတယ်။
Advanced application for viewing 3D map Myanmar [Burma] - MM.
- 3D and 2D map
- 3D and 2D compass
- Search Points of Interest
- Go to the position according to the coordinates
- Themes map
- Map layers (Natural Earth, Grid, MapQuest Aerial)
Play Store Link: 3D map Myanmar [Burma]
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Tuesday, July 01, 2014 No comments:
ပြည်တွင်းမှ သူငယ်ချင်းတို့ အတွက် Myanmar Map
ဆောင်ထား သင့်တဲ့ Application လေးတစ်ခုပါ။ မြန်မာပြည် မြေပုံကို အသေးစိတ် ကြည့်လို့ရတဲ့ အပြင် မိမိရောက်ရှီနေတဲ့ နေရာ နှင့် မိမိ သွားရမဲ့ နေရာ၏ အကွာဝေးများကို ချိတ်ဆက်ဤ ကြည့်ရှုနိုင်ပါသည်။
ထိုမျှမက မိမိရှာဖွေလိုသေ နေရာများကိုလဲရှာဖွေနိုင်ပါသေးသည်။
Myanmar Map (Burma) & Car GPS Navigator
The newly designed Myanmar Map app for Android phones and tablets makes navigating your places faster and easier. Find the best spots in town and the information you need to get there.
We spend several years to produce it.
Now it is available on Android.We use vector map to greatly reduce the size of map data.Just download this app, no additional data should be downloaded.
Myanmar Map isabest turn-by-turn GPS navigation that you can try for free. High quality maps from Google map and other provider.
Myanmar Map Features:
• Route drawing on map
• Saving route coordinates
• Track running, walking, jogging, biking, driving
• Supports all android devices
• Find where to go
• Learn about places
• Getapersonalized experience
• Tracking location via GPS/WIFI/cellular
Contact Developer: Visit Developer's Website
Email Developer: WasannoRawangkuong@gmail.com
Play Store Link: Myanmar Map
ကဏ္ဍ GPS, maps
Google Earth PRO Universal Crack is Here !
Google Earth isavirtual globe, map and geographical information program that was originally called EarthViewer 3D created by Keyhole, Inc,aCentral Intelligence Agency (CIA) funded company acquired by Google in 2004 (see In-Q-Tel). It maps the Earth by thesuperimposition of images obtained from satellite imagery, aerial photography and geographic information system (GIS) 3D globe. It was originally available with three different licenses, but has since been reduced to just two: Google Earth (a free version with limited function) and Google Earth Pro ($399 per year), which is intended for commercial use. The third original option, Google Earth Plus, has been discontinued.
Close Google Earth ,Download and run Google Earth Crack
Click Crack button and > And Click crack button in next message box too
After that Press Close button in message box and come to main crack window again.
Done :) Now you have Google Earth PRO :)
Download Google Earth Latest Setup + Crack.rar (24.8 MB)
Google Earth Universal Crack.rar (605 KB)
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Wednesday, March 12, 2014 1 comment:
ကဏ္ဍ Google, GPS, maps
Google Earth Pro 7.1.2.2041 With Patch
Google Earth ကတော့ တကယ်ကို လန်းပါတယ်ဗျာ။ မသုံးဖူးတဲ့သူများ သုံးကြည့်လိုက်ပါ။ အ
ရမ်းကိုခိုက်သွားမှာ အသေခြာပဲ။ Google Earth ကနေ ကိုယ်ကြည့်ချင်တဲ့ နေရာကို လိပ်စာရိုက်
ပြီးရှာလိုက်တာနဲ့ တန်းရောက်သွားတယ်။ တကယ်ကို 3D ရုပ်ပြနဲ့ ဖြစ်ပါတယ်။
အောက်မှာ Screenshoot နဲ့ ပြပေးထားပါတယ်။ အသေခြာလေး ကြည့် ကြည့်လိုက်ပါ။
နောက်တခုက Satellite ကနေ တိုက်ရိုက်ဆွဲ ကြည့်လို့ ရတဲ့နေရာတွေ ရှိပါသေးတယ်။ အိမ်ရှေ့
တံခါးပေါက်ထိ ကြည်လင်စွာ ဆွဲကြည့်နိုင်ပါတယ်။ Zoom ဆွဲတဲ့ အကွက်ပေါ်က လူ ပုံနဲ့ ရှိပါ
အဲကောင်ကို ကိုယ် လိုချင်တဲ့ နေရာမှာ ချပေးလိုက်တာနဲ့ အိမ်ဆိုရင် အိမ်ရှေ့ထိ လမ်းမှာဆိုရင်
လည်း လမ်းမကြီး ကို ပြတ်သားရှင်းလင်းစွာ မြင်ရပါတယ်။
ကွန်ပြူတာ သုံးသူတိုင်း တကယ်ဆောင်ထားသင့်တယ်နော်။ Full Version သုံးရအောင်
Patch ဖိုင်ပါ တွဲတင်ပေး ထားပါတယ်။
Setup.exe ကို Install ပြီးတာနဲ့ ဆော့ဝဲလ်ကို မဖွင့်ပဲ Patch ဖိုင်ကို ၂ ချက်ကလစ်လိုက်ပြီးရင်
အလယ်က စာကို အလစ်လိုက်၊ ဘယ်ဘက်အောက်မှာ OK ပေါ်လာရင် Actrivated ဖြစ်ပါပြီ။
စိတ်ဝင်စားရင် အောက်မှာ ဒေါင်းယူနိုင်ပါပြီနော်။
Pyae Phyo (MMiTD) by ဇော် မင်း သန်း
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Thursday, January 16, 20142comments:
မိမိ ကွန်ပြူ တာမှ နေ တကမ္ဘာလုံးကို ကြည့်နိုင်တဲ့ Worldwide Telescope
Microsoft Worldwide Telescope v5.0.3.1 (78Mb)!!
ဒီဆော့စ်ဝဲလေးကတော့ Microsoft Worldwide Telescope လို့ခေါ်ပါတယ်။ ဘာတွေ လုပ်ဆောင်နိုင်လဲ
ဆိုတာ အောက်မှာ ပုံတွေနဲ့ လည်းပြထား ပါသေးတယ်။
မိမိ အခန်းထဲကနေ စကြာဝဋ္ဌာကြီးနဲ့ ကမ္ဘာ တစ်ခုလုံးရဲ့ တည်နေရာ ဒေသ တိုင်းပြည် ပါမကျန် ကိုယ်ကြည့်
ချင်တဲ့ တိုင်းပြည် အဆောက် အဦးနဲ့ လမ်းကြို လမ်းကြား ကအစ အနီးကပ် ကြည့်ရှု့နိုင်တဲ့ Microsoft
Worldwide Telescope ပါပဲ။
စိတ်ဝင်စားရင်တော့ အောက်မှာပုံ လေးတွေ ကြည့်ပြီး ဆက်ဖတ်လိုက်ပါနော်...
older versions တွေကတော့ မရပါဘူး။ ကျန်တဲ့ ၀င်းဒိုးနဲ့ Microsoft Office 2007, 2010 or 2013 (32
bit and 64 bit) စသည်တို့မှာ ရပါမယ်။ မိမိစက်ထဲမှာ netframwork4ကိုတော့ အရင်အင်စတောလုပ်
~ New MIDI controller support allows customized control panels using inexpensive but powerful Midi performance controllers
~ Mange projector nodes, check status, render performance all from the WWT console
~ Screen Broadcast allows any application on the console to be shown asawindow in Full Dome
~ Support for WMS time Series images
~ New atmospheric and lighting shaders give much better realism for Earth and planets
~ Tilt and rotate lets you explore planet surfaces in Solar System mode
~ Full dome tour authoring, and instant full dome playback of desktop tours with overlays & images
~ Highly detailed models of ISS and Gemini Observatory for use in tours
~ Support for Earth based visualization as well as sky based visualization
မျှဝေသူ Te Tee မှာ Friday, January 10, 2014 No comments: